१२ जेठ, काठमाडौँ । एकदिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक पटक शून्यमा नै आउट हुने ५ खेलाडीहरुको नाम यसप्रकारको रहेका छ :
१. सनथ जयसूर्या
श्रींलका क्रिकेट टिमका पुर्वक्रिकेटर सनथ जयसूर्या यस सुचिको पहिलो स्थानमा रहेका छन । जयसूर्या एकदिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक पटक शून्य आउट भएका छन । उनले श्रींलका क्रिकेट टिमबाट ४४६ एकदिवसीय खेल खेल्दैँ १३४३० रन बनाएका छन । यस क्रममा उनले २८ सतक र ६८ अर्धसतक समेत बनाएका छन । उनी आफ्नो एकदिवसीय क्रिकेट करियरमा ३४ पटक शून्य रनमै आउट भएका छन ।
२. शाहिद अफरिदी
पाकिस्तान क्रिकेट टिमका पुर्वक्रिकेटर शाहिद अफरिदी यस सुचिको दोस्रो स्थानमा रहेका छन । उनले पाकिस्तान क्रिकेट टिमबाट ३९८ एकदिवसीय खेल खेल्दैँ ८०६४ रन बनाएका छन । यस क्रममा उनले ६ सतक र ३९ अर्धसतक समेत बनाएका छन । शाहिद अफरिदी आफ्नो एकदिवसीय क्रिकेट करियरमा ३० पटक शून्य रनमै आउट भएका छन ।
३. महेला जयवर्धने
श्रींलका क्रिकेट टिमका पुर्वकप्तान समेत रहेका महेला जयवर्धने यस सुचिको तेस्रो स्थानमा रहेका छन । उनले श्रींलका क्रिकेट टिमबाट ४४८ एकदिवसीय खेल खेल्दैँ १२६५० रन बनाएका छन । यस क्रममा उनले १९ सतक र ७७ अर्धसतक समेत बनाएका छन । जयवर्धने आफ्नो एकदिवसीय क्रिकेट करियरमा २८ पटक शून्य रनमै आउट भएका छन ।
वेस्टइंडिज क्रिकेट टिमका ब्याट्सम्यान क्रिस गेल यस सुचिको चौँथो स्थानमा रहेका छन । उनले वेस्टइंडिज क्रिकेट टिमबाट ३०१ एकदिवसीय खेल खेल्दैँ १०४८० रन बनाएका छन । यस क्रममा उनले २५ सतक र ५४ अर्धसतक समेत बनाएका छन । गेल आफ्नो एकदिवसीय क्रिकेट करियरमा २५ पटक शून्य रनमै आउट भएका छन ।
५. रोमेश कालुविथाराना
श्रींलका क्रिकेट टिमका पुर्वखेलाडी रोमेश कालुविथाराना यस सुचिको तेस्रो स्थानमा रहेका छन । उनले श्रींलका क्रिकेट टिमबाट १८९ एकदिवसीय खेल खेल्दैँ ३७११ रन बनाएका छन । यस क्रममा उनले २ सतक र २३ अर्धसतक समेत बनाएका छन । कालुविथाराना आफ्नो एकदिवसीय क्रिकेट करियरमा २४ पटक शून्य रनमै आउट भएका छन